पछिल्ला दिनमा राजनैतिक अवरुद्धता बढेको देखिन्छ यहाँले कस्तो अनुभुति गर्नु भएको छ ?हो अहिले एक प्रकारको अवरुद्धतामा छौं हामी । खासगरीकन सभामुख निर्वाचनको विषयले अवरुद्धताको अनुभुति गराएको छ । सभामुख कसलाइ बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरुले निर्णय गरिसक्नु नभएकोले यस्तो अनुभुति भएको हो ।
सभामुख छान्ने कुरोमा यसरी अलमल हुनुको कारण के रहेछ ?
वास्तवमा सभामुख छनौटको विषय ठूलो थिएन । यसलाई एमीसीसँग जोडेर हेरेकोले नै जटिल बनेको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन व्यवस्थापन गरेर ठिक निर्णय दिनुपर्नेमा ढिलाई गरिएको छ । देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु खेल्ने गरी वातावरण बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यस्तो अलमलमा राष्ट्रको स्वार्थभन्दा बाहिरी तत्वको भूमिका बढि छ ।
एमसीसीको विषय जब्बर बन्यो कि बनाइयो ?
हो, यसलाई जब्बर बनाइएको हो । हामीलाई संसारका कुनैपनि मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग लिन कुनै गाह्रो छैन । प्रत्यक्ष सैनिक संगठनमा आवद्ध मुलुकको पनि सहयोग लिनुमा हामीलाई गाह्रो हुँदैन । तर हामी आफैं नै त्यस्तो गठबन्धनमा सामेल हुने गरी जानु हुँदैन । यो विषयलाई निकै हलुका बनाइयो ।
एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत नै हो त्यसो भए ?
हामी पंचशील र असंलग्नतामा प्रतिबद्ध रहि आएका छौं । स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुक भएकाले कसैको बन्धनमा बाँधिन चाहदैनौं । यस्तो देशले कसैको शैन्य अभिलाषा पूरा गराउन कसैको पनि कुनै मोर्चा बन्न सक्दैन । एमसीसी के हो, यसबाट मुलुक कसरी असजिलोमा पर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ उल्लेखित बुँदाहरुले प्रष्ट पारेका छन् । नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने गरी, उसका प्रावधानलाई हुबहु मान्न पर्ने गरी हामीले कसरी स्विकार्न सक्छौं । पैसा र सहयोगको नाम र बहानामा मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कसरी तौलन सक्छौं । यो चाहि हामीलाई आपत्तिजनक छ ।
एमसीसी त मानवीय सहयोगको प्याकेज हो, लिन हुन्छ भनिएको स्थिति छ नि त !
हामीले भन्दै आएका छौं । हामीले हाम्रो आवस्यकतामा मागेका कुरा खुल्ला दीलबाट कसैले दिने लिने कुरामा आउछ भने हामी पुरा तयार हुन्छौं तर, यो विषय त अमेरिकाकै २ मन्त्रीले नै भनिसके र काठमाण्डौंस्थित दूतावासका उच्च पदाधिकारीले भनिसकेको विषय हो कि, इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भनेर । इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी के हो भनेर दुनियालाई छर्लङ्गै छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको हाम्रो मुलुकले त्यस्तो कुरो कसरी स्विकार्छ ।
एमसीसी पास भयो भने देशै डुबिहाल्ने हो र ?
भोली हाम्रो देश के हुन्छ भन्न सकिँदैन तर, अहिले हुने के हो भने यसबारे नेपालको कानुन, सरकार, संविधान र अदालत सबै पंगु हुन्छ । कुनै सहयोगलाई संविधान भन्दा उपर राख्न कहाँ सकिन्छ ? त्यसो भयो भने हाम्रो स्थिति के होला । अमेरिकाले धेरै लगानी गरेका ठाउमा कस्ता कस्ता बोली, बचन र व्यवहार देखाएको छ ? सबैलाई प्रष्ट छैन र भन्या ?
एमसीसी र सभामुख जोडिएको हो त ?
त्यो त प्रष्टै देखिन्छ । एमसीसी पास गराउन सकिने उपयुक्र्त पात्रको खोजिमा लागेको कारण ढिलाई भएको प्रचार पनि गरिएको छ । एमसीसी सबै प्रक्रिया पूरा गरी सदनबाट पास मात्र गराउने स्थितिमा रहेको र सभामुखमा भएको नचाहिदो किचलोले यो दुवै विषय प्रष्ट जोडिएको देखिन्छ ।
डा. शिवमाया त अहिलेसम्म पनि अडानमा हुनुहुन्छ नी !
उहाँलाई पार्टी सचिवालयले राजीनामा दिएर निकासको ढोका खोल्नुस भनिसकेको छ । उहाँले कसैको आड र उक्साहटमा अटेर गर्नुभएको छ । सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिसँग त्यसको औषधि छ । उहाँ आफैले अवरोध गर्नु भयो भने पार्टीले समानुपातिक सूचीबाट फिर्ता लिइदिन पनि सक्छ । विश्वास गरौं, उहाँले मुलुक, निकास र पार्टी एकताको विशिष्ठतालाई ध्यानमा राखी सहजीकरण गर्नुहुनेछ ।
यो अवरोधको विषयमा पार्टीको धारणा के हो ?
सचिवालय र स्थायी समितिले प्रष्ट भनेको छ कि, इण्डोप्यासिफिकको अंग हो भने एमसीसी पास हुँदैन । तर, यो अहिले पुष्टि भैसकेकाले पार्टी पंक्ति प्रष्ट छ । एक दुइ नेता र झुण्ड बाहेक ठूलो जनमत विपक्षमा छ । दुई अध्यक्षहरुले सभामुख छान्ने काम पनि यसै कारण ढिला भएको भनिएको छ । यो पनि यसरी लम्ब्याउने हो भने पार्टीको प्रणाली र बिधिबाटै भएपनि टुंग्याउनुपर्छ । कांग्रेसले समेत खिज्याउने स्थिति तर्फ खासगरी दुई अध्यक्षको ध्यान गैसकेको छ र समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।